Ị nọ ebe a: Home / Fertilizing Ngwọta / chemicals / Iji Coca Cola Cap N'ihi Micro Na-enweta Fetilizers
Iji nri na-eme ka ụwa dị njọ.
Enwere ike ịkwụsị ndị ọrụ ugbo n'ụwa nile iji nri fatịlaịza? Enweghị ike ozi ziri ezi ?? !! Kedu maka ịkwụsị fatịlaịza ruo oge 6 obere?
Enweghị mgbochi chemical na-amasị m. Oge. Ka o sina dị, na mmụọ nke Planet Fixer Digest, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ngwọta iji 3 gaa 6 oge na-erughị ọgwụ fatịlaịza, karịa ka ọ dị mma maka ụwa. Nke a bụ ihe mere m ji kpebie ibipụta isiokwu a gbasara ọgwụ na-edozi ahụ.
Ị maara ihe ọhụrụ, usoro, usoro nke nwere ike idozi, gwọọ, enyemaka mama ụwa?
Excellent diaporama from BBC News – Na foto: Ịgba ugbo na-egbu nri na Niger!
Documentation – Iji Micro Na-enweta Fatịlaịza N'Africa